Indlela yokunyamekela iimfuyo entwasahlobo
Ibinzana elithi "Matshi ikati" ibangela ukumomotheka ebusweni bethu kwaye ayisoloko ibhekisela kwiikati. I-Spring inempembelelo enkulu kuzo zonke izinto eziphilayo, kwaye xa zifudumala ngaphandle, ufuna unxibelelwano oluninzi kunye nesondo esahlukileyo. Ngokukodwa kunzima kwizilwanyana zasekhaya, kuba zivalelwe kwiindawo zokuhlala ezidolophini. Apha bona kunye nabanikazi babo abayi kuba nomona, kuba ukuziphatha kwezilwanyana kuguqulwa kakhulu. Indlela yokunyamekela iimfuyo entwasahlobo, sifunda kule ncwadi. Ewe, kukho ezinye iingxaki ezibangela iingxaki kubanikazi kwaye zikhathaze abahlobo bakho abane abaneemilenze, siza kuthetha ngale nto.
Umsebenzi wesondo kwizilwanyana zasekhaya
Ngentwasahlobo, uhlobo lubiza ukuba zonke izilwanyana zizalwe, kwaye akumangalisi xa izilwanyana zethu ziziphatha ngokuqhelekileyo. Ukwanda kobushushu bomoya kunye nokwanda kweeyure zomhla kukhokelela ekunyusweni komsebenzi wesondo, oku kubonakala kwiikati nakumakati.
Ukukhala kwekati akunikezi ukuphumla kubamelwane babo okanye abaphathi babo. Ngeli xesha, isilwanyana siqala ukuphawula intsimi, ingenzi ngokuzibandakanya, kwaye akukho nto iyalungisa ngayo okanye iyayigxotha. Isilwanyana sisebenza kakhulu, kwaye ezinye zazo zibonisa ubundlobongela kubo bobabini iinkosi kunye nezihlobo.
Ndibizela uthando lwezinja. Iingozi kakhulu zizilwanyana ezilahlayo, kwaye ngexesha "emishadweni yeenja" ziba nobudlova kwaye zikwazi ukuhlasela abantu. Unokukunceda njani iimfuyo zethu? Ukunciphisa uxhalaba lwezilwanyana ngeli xesha lokuzingela ngocansi kwizinja kunye neekati, kunokwenzeka ukuba unike amalungiselelo e-hormone kwiijovnyo okanye ezinomdla, kodwa zenza okwesikhashana.
Kungcono ukukhetha ukucwilisa amalungiselelo emifuno, njengokuthi ("Fitex", "Cat Bajun"), kuba ukusebenzisa i-hormone kunokukhokelela kwimiphumo eyahlukileyo eyahlukeneyo, njengokwenyuka kwezitho zangaphakathi kunye nezicubu. Ukuba awuyi kucwangcisa ukufumana imbewu kwizilwanyana zakho, ngoko ke kulo mzekelo, ukugxotha kuyona nto ikhethekileyo. Ukugxothwa kwamadoda kunye neekati zenziwa kwiinyanga ezili-6 ubudala, ukugxilwa kweentsimbi okanye iinkati - ukusuka kwiinyanga ezili-10-12. Isilwanyana esincinane sikhuthazela ukusebenza ngokulula, kwaye ke ingozi yezifo ezithile zancitshiswa, ngoko kungcono ukuba ungalibazisi ukusebenza.
Ngentwasahlobo, lixesha lokugonywa izilwanyana, kuba iifayili ezahlukeneyo ziyavulwa ngeli xesha. Ukugonywa kubaluleke kakhulu ukulwa neerbi. Esi sifo sineminyaka emininzi ubudala, kwaye akunakwenzeka njalo ukugcina umntu ogulayo. Ukwazi ukuba le ntsholongwane iyingozi kubantu, umnikazi kufuneka ahlaziywe kwakhona kwaye enze isilwanyana sakhe sigonwe ngokumelene neerbi.
Umthombo osisiseko sentsholongwane yintlanzi zasendle, kunye neenki kunye namagundane, ngokwemvelo le ntsholongwane iphila rhoqo. Yaye ngubani onokuqinisekisa ukuba xa uhamba kunye nezifuyo zakho entwasahlobo, awuyi kudibana ne-rodent? Ukuba uqaphela ukuba umsila uphuma emlonyeni wesilwanyana sakho, abafundi baxhuzulwa, baziphatha ngokugqithiseleyo, okanye bafihla ekhoneni, babonise kwizilwanyana zezilwanyana kwaye bazame ukuziphatha kakuhle nale silwanyana.
Ukongeza kwi-rabies, kukho izifo ezinjalo: i-fungal, ibhakteria kunye ne-viral. Umnini ngokwakhe ngeengubo ezingcolileyo angazizisa ekhaya - aze agule, isilwanyana singakwazi kwaye asishiye imida yakhe.
Izilwanyana zigonywe kungakhathaliseki ixesha, izitofu zenziwa kwiinyanga ezi-2 okanye ezi-3 ubudala, emva koko unyaka owodwa, kwaye iphinda iphindwe rhoqo ngonyaka. Okwangoku, izitofu eziyinkqubo ezininzi zisebenzisana nezifo eziphambili, ezidla ngokuchaphazela izilwanyana. Ngaphambi kokugonywa, isilwanyana kufuneka siphulukiswe ngama-parasites, njengoko iyanciphisa umkhuhlane. Ngokuxhomekeka kubukhulu besilwanyana, banikwa amalungiselelo ezivela kwiimbungu.
Iziphumo ze-avitaminosis kunye ne-molting
Ingubo yezilwanyana zasekhaya ihluka ngoxhomekeke kwixesha, iminyaka. Uninzi oluninzi luyanda kwi-molt ekwindla nakusentwasahlobo, kodwa xa ityhologi, oko kukuthi, iinwele zivela kwi-shreds, ngokungalingani, kuyafaneleka ukubeka ingqalelo kwi-vitamine eyaneleyo yezilwanyana kunye nokutya. I-Avitaminosis ithintela kakhulu kwimpilo yomhlobo onamaqhina amane kunye nokubonakala kwayo.
Ukuba yonke into iyinto eqhelekileyo, i-moult iya kudlula ingabonakali, kodwa i-vitamin kunye ne-mineral inefficiency, kunokubakho ukulibaziseka kwi-molting, kwaye uboya buhamba. Xa kukho ukungabikho kwamavithamini ekudleni, oku kubonakala ngokugqithiseleyo kwiboya, kuba buhlungu. Ukugcinwa kakubi, "ukuthululwa", ukuphazamiseka kukuphazamiseka, ukuqhuba kuvela emacaleni omlomo, ulusu luba lumile. Ukuze unqande inkathazo enjalo, ukuze ukhusele, kufuneka uvelise amaminerali kunye namavithamini ekudleni. Kwiivenkile ezizodwa ungathenga iimveliso ezinzima.
Ngethuba lokutya, xa ukondla isilwanyana ngemveliso yendalo, kuyimfuneko ukuzisa amalungiselelo e-vitamin kwisondlo. IiVithamini zinikezelwa kwinyanga enye, kwaye ikhefu lenziwa kwiiveki ezimbini. Ukuba ukondla isilwanyana ngeefama zoshishino, kwaye ngoko akukho nto iphazamisayo, ngoko akudingeki ukuba unike amavithamini angaphezulu.
Ungakulibali ukuba ingubo yomhlobo wakho onamagxa amane kufuneka ubukele, udibaniswe nezixhobo ezikhethekileyo - umzekelo, sebenzisa igrafu ekhethiweyo okanye ikhefu rhoqo. Yenza ngokucophelela, ngokuba uboya buya kudideka, kwaye ke inkqubo yokudibanisa iya kuba yinto engathandekiyo. Kule nqubo kufuneka ufunde umfuyo wakho usebuntwaneni: izinja ngale ndlela zihlala kuzo, kodwa akuzona zonke iikati ezithandayo xa zidibanisa iingubo zabo.
Ngoku uyazi indlela onokunyamekela ngayo intwasahlobo yezilwanyana. Ukuphulaphula isiluleko kwaye ukhumbule, isilwanyana ngasinye ngendlela yaso siyiyo, ngoko ke akufanele uvumele ukuhamba kweengxaki zayo, kungcono ukuba ungayigqibi isigqibo sakho ngokwakho, kwaye kunokwenzeka ukuba uzame ukubonisa izilwanyana zakho kwiingcali. Njengoko u-Antoine de Saint-Exupery odumileyo wathi: "Sijongene nalabo baqhelile! "- kwaye, ngokuqinisekileyo, wayelungile.
Unxibelelwano nolwimi lwezilwanyana
Inja endlini "ngenxa" kwaye "ngokumelene"
Thenga isilwanyana esitsha esingaqhelekanga
Umhlobo wam enemilenze emine
Indlela yokuphakamisa intshontsho ehlakaniphile neyentetho?
Ukuzala iHungarian kuvas
Yintoni onokuyenza xa ufuna ukuba nesilwanyana kumntwana?
Iibisiki kunye ne-orange ne-tshokoleta
Izicathulo zezingane kwiziko
Kunama-porridges ancedo kwizinto eziphilayo
Irayisi e-Brown kunye nemifuno
Ubumba benkomo ebhakiweyo kunye nemifuno
Indlela yokuthintela imibimbi ecaleni kwamehlo
Iintlobo zezahlulo zepropati emva komtshato
Indlela yokukhetha umbala ofanelekileyo we-nail polish?
Yintoni eyasithintela ukwenza abahlobo abatsha?
I-coamel ikhukhi kunye namanqatha
Unyango lwezifo zamehlo kubantu
Khetha ukhilimu wesikhumba sengxaki ngokuchanekileyo
UDenis Klaver ulungiselela unyana ophezulu ophezulu
Vichy Healing Shower
I-cocktail ye-ice cream kunye nama-strawberries